sai nyunt lwin: ခွေး
Posted by sainyuntlwin at 18:03
national 14 May 2012 at 15:05
ထိုင်းနိုင်ငံက အိမ်တအိမ်မှာ လာပြီးအိမ်ဖော်လုပ်ရတဲ့ အသိတယောက်က ပြောပြတာ သူ့အလုပ်က ခွေးအိမ်ကို တနေ. ၂ ခါ သန်.ရှင်းရေးလုပ်၊ မနံအောင် စပရေးဖြန်းပေးရတယ်။ ခွေးပန်ကန်ဆေး ၊ အလုပ်အပြင် ခွန်ထောင်းလို့ခေါ်တဲ့ခွေူးကို တနေ. ၂ ကြိမ် သွားတိုက်ပေးရပါတယ်၊ တကယ်တိုက်မတိုက် သူ့သူခင်က နမ်းကြည့်တယ်၊ နံနေရင် အ်မ်ဖော်ကို ဆဲပါတယ်၊ ခြေသည်းညှပ်ပေးရတယ်၊ ခွေးကိုရေချိုးပေးရင် သူ့အတွက်သီးသန့်ဝယ်ထားတဲ့ ရှန်ပူသုံးရတယ်။ အကျီင်္လဲပေးရတယ်၊ ခွေးဝတ်တဲ့အကျီင်္လဲ လျှော်ပေးရတယ်၊ အိမ်ရှင်က တခါတခါ စိတ်လိုလက်ရ ခွေးထီးဖြစ်တဲ့ ခွန်ထောင်းကို လက်သည်းနီပါ ဆိုးပေးတယ်၊ သူက အိုက်ထောင်းလို. ခွေးကို ငေါက်မိတာ အိုက်လို.မခေါ်ရဘူး ခွန်ထောင်းလို့ ခေါ်ရမယ်လို့ ပြောသတဲ့။ ခွန်ထောင်းမှာ ကျန်းမာရေးကဒ်လဲရှိပြီး ဆရာဝန်ချိန်းတဲ့အတိုင်း ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးရတယ်၊ အဲဒီခွေးမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ ခွန်ထောင်းဓာတ်ပုံပါ ကပ်ထားပြီး ခွေးအရောင် အမျိုးအစား ကိုယ်အလေးချိန် ပိုင်ရှင်အမည် ဖုံးနံပတ် ပါရေးထားသတဲ့ရှင်။